1. Jereo ny fisehoany
Voalohany mijery fa ny vavahady fitaratra fisehoan'ny zava-pisotro dia mitongilana ary tsy simba, na voarangotra ilay vera, na simba na mihidy ilay kabinetra. Avy eo zahao raha misy lavaka, goroditra na loko tsy mitovy amin'ny famafazana ny famafazana ny tampon'ny tany; na misy famoahana fitaovana matevina. Na milamina sy madio ny vatan'ny kabinetra sy ny talantalana, ary na malalaka ny visy.
2. Andramo ny masinina
Ampifandraiso ny famatsiana herinaratra, ampifanaraho amin'ny halaviran'ny maripana mety ny hafanana, ary jereo ny fiasan'ny compressor, motera fanamoriana, evaporator ary condenser. Hamarino raha miasa ara-dalàna ny termostat sy ny singa hafa, ary raha ara-dalàna ny fiatraikany.
3. Safidio ny fampangatsiahana rivotra na ny kabinetra fampisehoana fisotroana mivantana?
Ny mahasamihafa ny fampangatsiahana rivotra sy ny fampangatsiahana mivantana:
Fanamafisana ny mpankafy: Ny fanamafisana ny fanana dia azo amin'ny alàlan'ny rivotra mangatsiaka. Haingam-pandeha ny fihenan-tsofina, zaraina mitovy ny mari-pana, tsy dia mifintina kokoa ny vera, ary manana ny fiasan-dronono izy io. Izy io dia miaraka amin'ny fampisehoana fanaraha-maso ny mari-pana amin'ny elektronika mba hahitana mazava ny mari-pana anatiny. Saingy, noho ny mpankafy fanampiny sy ny fahasarotan'ny rafitra anatiny, dia somary avo ny vidiny, ary ny fandaniana herinaratra dia somary avo ihany koa. Ampiasaina amin'ny fivarotana enta-mavesatra misy zava-pisotro misy alikaola sy toerana be hamandoana ao an-toerana io.
Fangatsiahana mivantana: ny fantsom-by an'ny evaporator dia alevina ao anaty vata fampangatsiahana mba hampangatsiaka, ary hipoitra ao anaty vata fampangatsiahana ny fanala. Somary miadana ny hafainganan'ny vata fampangatsiahana, saingy ambany ny fanjifana herinaratra, ny tabataba ambany, ny fahaizan'ny fitazonana vaovao ary ny faharetany. Amin'ny fampiasana fifehezana ny mari-pana mekanika, fehezin'ny knob ny mari-pana, ary tsy azo ovaina tsara ny mari-pana ary tsy afaka mahita tsara ny mari-pana anatiny isika.
4. fanaingoana manokana
Ny fampisehoana zava-pisotro dia azo ampiasaina tsy hanehoana fotsiny ireo zava-pisotro tiana amidy, fa koa ho an'ireo dokam-barotra. Ohatra, azonao atao ny mametraka ny afisy fametaka afisy sy ny sary famantarana anao eo amin'ny vatan'ny kabinetra sy boaty hazavana, azonao atao sokitra ny Ny logo manokana eo amin'ny vera, na azonao atao ny manamboatra vavahady fitaratra misy efijery LCD hahatratrarana ny vokatry ny fanaovana dokambarotra ary hahasarika mpanjifa maro kokoa. Avy eo, i Nenwell dia afaka manampy anao hamolavola drafitra famolavolana manokana mba hanatsarana ny tanjaky ny marika mpanjifanay ary ny vokatry ny dokam-barotra.
5. Vidiny sy serivisy
Amin'izao fotoana izao, mihamaro ny marika fampirantiana fisotroana, fa tsy mitovy ny vidiny. Amin'ny maha mpanjifa anao, mila mifidy mpamatsy matanjaka ianao. Ireo izay mandinika ny serivisy aorian'ny varotra dia afaka miantoka ny kalitaon'ny fampirantiana fisotroana. Tsy midika izany fa tsara ny kalitao, fa ny kalitaon'ny kabinetra fampisehoana zava-pisotro mora vidy dia azo antoka fa tsy azo antoka. Afaka nanompo mpamokatra zava-pisotro fanta-daza sy mpitarika indostrialy fanta-daza amin'izany izahay, ary nahazo ny fankasitrahan'ny mpanjifa. Izahay dia manana antoka feno aorinan'ny varotra aorinan'ny varotra mba hanomezana ny mpanjifa ny takelaka fampisehoana zava-pisotro tsara indrindra.